एनआरएनए महासचिवमा डा. हेमराज शर्माको उम्मेद्वारी घोषणा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १८:३१ English
एनआरएनए महासचिवमा डा. हेमराज शर्माको उम्मेद्वारी घोषणा
अल्डरसट, ३ असोज । गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महासचिवमा डा. हेमराज शर्माले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । अल्डरसटमा पत्रकार सम्मेलन गरी गैर आवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलका सहप्राध्यापक डा. शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
विधान समितिका संयोजक शर्माले एक्जुकेटिभ पदमै काम गर्ने सोच बनेर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जनाएका छन् । एकेडेमिक करिअरसंगै सोसाइटीसंग जोडिरहने आफ्नो इच्छा भएको भन्दै उनले कार्यकारी पदमा आफ्नो आकांक्षा रहेको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले आफ्नो ७ निर्देशक सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरे । उनले सबैको एनआरएनए, सवल र बहुआयामिक एनआरएनए, स्मार्ट एनआरएनए, परिणाममुखी एनआरएनए, दिगो एनआरएनए, सिप, ज्ञान र नवप्रवर्धनका लागि एनआरएनए र उत्तरदायी र पारदर्शी एनआरएनए आफ्ना सिद्धान्त रहेको सार्वजनिक गरे ।
गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं विश्व सम्मेलन आउँदो १५ देखि १७ अक्टोबरसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १५:५४ मा प्रकाशित